Bogga ugu weyn Degenaanshaha Florida 2021: Sida Loo Noqdo Degane Florida
Haddii aad hadda ku sugan tahay Florida, oo aad rabto inaad hesho dhammaan faa'iidooyinka deganaanshaha halkaas, markaa waa inaad si rasmi ah u codsataa Deganaanshaha Florida.
Tani caadi ahaan waqti ma qaadato, hase yeeshe, dad badani ma oga sida tan loo gaadho.
Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay sida loo noqdo degane Florida. Waxaan kaa qaadi doonaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaad qaaddo si aad tan u gaarto.
Waxaan sidoo kale eegi doonnaa faa'iidooyinka noqoshada rasmiga ah ee Gobolka weyn ee Florida.
Ku saabsan Florida
Iyada oo ay ku nool yihiin in ka badan 21 milyan, Florida waa tan saddexaad ee ugu dadka badan iyo 22 -aad ee ugu ballaaran 50 -ka Mareykanka.
Waxaa laga yaabaa gobolka ugu weyn gobollada koonfur -bari ee Mareykanka oo xuduud la leh Galbeedka Gacanka Meksiko, waqooyi -bari Alabama - Florida waxay hoy u tahay magaalada toddobaad ee ugu dadka badan Miami - taas oo noqotay meel loo tago dadka xilliga jiilaalka.
Gobolku wuxuu leeyahay mid ka mid ah dhaqaalaha ugu weyn Mareykanka mana aha wax adag in la arko sida ay u leedahay qaar ka mid ah xeebaha ugu fiican gobolka.
Tan hoose ayaa lagu sheegay sida qofku u heli karo degenaanshaha Florida.
Bilow Shuruudaha Deganaanshaha
Tani asal ahaan waa dhammaan waxyaabaha ay tahay inaad bilowdo safarkaaga gaaban si aad u noqoto degane Florida. Waa inaad marka hore
#1. Qaado Liisanka Darawalnimada Florida
Tallaabada ugu horreysa uguna weyn ayaa ah inaad hesho laysanka darawalnimada Florida. Waxaa la ii oggol yahay inaan u maleeyo inaad hore u joogtay Florida, ama aad qorsheyneyso inaad si joogto ah ugu soo guurto halkan, si aad u hesho liisanka.
Uma baahnid inaad ka walwasho qaadashada imtixaan kale, maahee haddii aadan waligaa ku haysan liisan darawalnimo gobol kale.
Helitaanka liisankaan wuxuu muujinayaa inaad dhab ka tahay inaad beddesho degenaanshahaaga gobolka waxayna ka dhigi doontaa mas'uuliyiinta inay si wanaagsan u eegaan codsigaaga deggenaanshaha ah.
Waxaad heli kartaa middaada ama ka hor intaadan xareynin cadeynta degenaanshaha. Si kastaba ha ahaatee, ogow haddii aad marka hore fayl garaysato, waxaad haysataa 30 maalmood oo keliya si aad u hesho liisanka darawalnimada.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah dukumentiyada aad u baahan doonto si aad u hesho laysanka darawalnimada.
U qaado liisankaaga ka-baxsan gobolka Waaxda Badbaadada Waddooyinka iyo Baabuurta ee Florida. Qaado hab aqoonsi.
Caddaynta lambarkaaga badbaadada bulshada. Kani wuxuu noqon karaa kaarkaaga Lambarka Bulshada, W-2, ama jeegga mushaharka.
Bixi caddaynta cinwaankaaga Florida. Diiwaangelinta baabuurka, warqadda guriga, ama biilasha korontada ee dhowaan ayaa samayn doona.
Qaado liisan aan darawalnimo ahayn haddii aadan damacsanayn inaad kaxayso.
#2. Diiwaangeli Baabuurkaaga
Haddii aad si guul leh u dejisay degenaanshahaaga, markaa tallaabada xigta ee ay tahay inaad qaaddo waa inaad diiwaangeliso baabuurkaaga.
Wareeji magacaaga baabuurka oo hel diiwaangelinta baabuurkaaga '' Florida ''.
Waxaad haysataa 10 maalmood oo keliya ka dib marka aad samaysato xaaladda degenaanshaha Florida si aad u dhammaystirto hawshan.
Si aad u dhammaystirto hawshan waxaad u baahan tahay
Ka hel caymis baabuur Florida. U soo gudbi caddaynta siyaasaddaada cashuurqaadaha degmada.
Tus cinwaanka asalka ah cashuurqaadaha degmada.
U soo qaado baabuurka aad rabto inaad iska diiwaangeliso xafiiska cashuurqaadaha degmadaada, si ay u eegaan VIN.
Bixi khidmadaha. Waxay ku kacaysaa qiyaastii $ 400 cinwaanka oo waxay iska diiwaangelisaa gaarigaaga markii ugu horreysay Florida. Waxa kale oo lagaa doonayaa inaad bixiso khidmadaha diiwaangelinta caadiga ah, oo ku kala duwan da'da, nooca, iyo miisaanka gaadhigaaga.
#3. Noqo Cod -bixiye Diiwaangashan
Waxaad halkan ku dhalan kartaa gabar laba shimbirood leh. Markaad qaadanayso liisankaaga darawalnimada waxay ku siin doonaan foomka cod -bixiyaha oo ay la socdaan foomamka cinwaankaaga cusub.
Haddii aad ku mashquulsan tahay inaad samayso isla waxqabad isku mar, markaa waxaad ku samayn kartaa Kormeeraha Doorashada.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad sugtaa inta ay furan yihiin buugaagta diiwaangelinta cod -bixiyayaashu. Sababtoo ah waxay xireysaa 30 maalmood ka hor doorashada oo dib ayay u furmaysaa.
Foomka diiwaan -gelinta cod -bixiyaha si dhib yar ayay ku qaadanaysaa in la buuxiyo shan daqiiqo. Taas samee oo u dhiib oo waad fiicantahay inaad tagto.
Haddii aad ku guulaysatay tallaabooyinkan hordhaca ah. markaa hadda waa inaad;
Naftaada Samee Sida Floridian...
… Waxaadna ku samayn kartaa tan
#1. U Gudbinta Baaqa Degenaanshaha
Waxaad u baahan tahay inaad muujiso in meesha aad deggan tahay ay tahay Florida, oo kuma filna inaad guri ku yeelato. Si aad u awooddo inaad tan samayso, waxaad u baahan tahay inaad tusto inaadan ahayn “shimbir -baraf” kale oo keliya oo xusuusata Florida xilliga jiilaalka.
Sidaa darteed, buuxi Baaqa Deganaanshaha. Tani waxay xaqiijin doontaa inaad runtii tahay degane Florida oo aad dooratay inaad si joogto ah u degto halkan. Waxaad ka heli kartaa Baaqa Deggenaanshaha karraaniga maxkamadda wareegga.
Si tan loo sameeyo si dhib yar ama aan dhib lahayn, kaliya waxaad u baahan tahay inaad jir ahaan joogtid Florida iyo dhammaan si aad u muujiso ujeeddada. Si aad u muujiso ujeedo waa inaad caddeyso inaad hadda ku leedahay lifaaqyo qiiro leh Florida - lifaaqyada aad jeceshahay inaad ilaaliso; sida qaadashada kaarkaaga codbixiyayaasha, diiwaangelinta baabuurkaaga ka baxsan gobolka, ama dhakhtar. Intaas waxaa sii dheer, si firfircoon uga qaybgal bulshada aad ka dhex muuqato. Sidoo kale waa hab kale oo lagu muujiyo ujeeddada.
Haddii aad haysato Baaqa Degaanka, micnaheedu waa in canshuurahaagu hadda aado gobolka weyn ee Texas. Tanina xitaa waa faa'iido maxaa yeelay Florida ma leh dakhli, dhimasho, ama canshuurta guryaha, tani waxay noqon kartaa tallaabo caqli leh.
Haddii aad leedahay hal degenaansho oo keliya, caddeynta deganaanshuhu lama huraan maaha, in kastoo ay caqli badan tahay (faa'iidooyinka canshuurta).
#2. U Xereyso Ka -dhaafitaanka Guryaha
Sharciga Homestead ee Florida wuxuu kaa ilaalinayaa inaad gurigaaga ku weydo dayn -bixiye ama qof kasta oo dayn ku leh haddii ay dhacdo wax ka -reebitaan dhinacaaga ah. Si kastaba ha ahaatee, tan kuma jirto amaahda guryaha.
Tan micnaheedu waa haddii haddii ay tahay inaad waligaa ku dhawaaqdo musalafnimo, ma aha inaad ka walwasho badan haddii aad xaraysay ka -dhaafitaan guri -guri. Waxaad u codsan kartaa guri -guri marka aad magacaaga ku haysato Baaqa Deganaanshaha.
Tani waxay hagaajinaysaa xaaladdaada canshuuraha si ka sii wanaagsan maxaa yeelay sida ku cad xeerka “Badbaadi Gurigeenna”, marka aad u qalanto ka -dhaafitaanka guryaha, qiimaha la qiimeeyay ee hantidaada ee ujeeddooyin canshuureed ayaa xambaarsan ka -dhaafitaan $ 50,000 ee ugu horreeya qiimaha la canshuurayo ee dhammaan canshuuraha hay'adaha marka laga reebo degmo dugsiyeedka (taas oo oggolaanaysa ka -dhaafitaan $ 25,000).
Intaa waxaa dheer, mar haddii aad u qalantid, qiimaha la qiimeeyay ee ujeeddooyinka canshuuruhu ma kici karo wax ka badan 3% sannad kasta. Taas micnaheedu waa sinnaan aadan ku bixin doonin.
#3 Ka Shaqayso Florida
Helitaanka shaqo ayaa ka adkaanaysa dood kasta oo soo jeedinaysa inaadan ku dhisnayn gobolka Florida. Hadda waxaad leedahay mushaharkaaga oo ka imanaya Florida, waxaadna ku leedahay degane, waxaan jeclaan lahaa inaan arko qof su'aal ka keena deganaanshahaaga !!
Haddii Caddayntaada Degenaanshaha su'aal laga qabo, shaqo ka helidda Florida waxay baabi'in doontaa dhammaan su'aalaha. Tani waxay caddaynaysaa inaad dhab ahaantii deggan tahay oo aad hadda ka heli karto dhammaan faa'iidooyinka ku jira.
#4. Hab kale oo lagu Dhisi Karo Degenaanshahaaga ayaa ah in ilmahaaga lagu qoro dugsiga Florida.
Helitaanka waaxdaada oo lagu qoro dugsi dadweyne ama gaar loo leeyahay ee Florida ayaa weli ah hab kale oo lagu dhisi karo deganaanshahaaga. Ilmo, si kastaba ha ahaatee, micnaheedu waa waxaan ka hadleynaa qof ka yar 18 sano.
Haddii aad tan samayso, waxaad culays ku dari doontaa caddeyntaada kiiska guriga.
#5. Xareyso Canshuuraha Federaalka Kadib Noqoshada Degane Florida.
Hadda ka hor waxaad u diri doontaa cashuur -celintaada Atlanta, Georgia oo ah Xarunta Adeegga Dakhliga Gudaha markaad u guurto Florida. Hubi inaad soo gudbiso canshuur celintaada ugu dambeysa ee gobolkaagii hore, oo ku qor “soo celinta ugu dambeysa”, oo isticmaal cinwaankaaga hadda si ay u caddaato inaad guurtay.
Haddii aad ku nooshahay laba gobol isla sannadkaas, fiiri xereynta soo-celinta sanad-dhiman. Dawladuhu si kala duwan bay isugu daraan (gobol kastaa wuxuu leeyahay xeerar kala duwan), markaa eeg xaaladdaada gaarka ah ka hor intaadan waxba qaadan
Si loo sii wanaajiyo kiiskaaga waxaa lagugula talinayaa waxyaalahan hoose
#1. Ku wareeji Dhammaan Xisaabaadka Hay'adaha Florida:
Sida iska cad waxaad ku lahayd koonto bangi gobolkaagii hore, koontada u wareeji Bangiga Floridian. Sidoo kale, waa inaad tan u samaysaa dhammaan koontadaada ama xubinnimada gobollada kale.
Muujinaya inaad si firfircoon ugu wareejinayso dhammaan wixii adiga kaa quseeya gobolkaaga cusub waxay ku tusi doontaa inay kaa go'an tahay inaad ka dhigto gobolka mid deggenaansho joogto ah.
Markaa, haddii aad tahay diin ku biir kaniisad kale halkan. Ka mid noqo qayb ka mid ah bulshada aad ku dhex nooshahay, u dhaadhac xarunta bulshada oo iskaa wax u qabso ama wax kale.
#2. Ha Beddelaan Kuwa Ay Tahay Inay Ogaadaan Cinwaankaaga
Tani waxay ka koobnaan kartaa rukummada joornaalkaaga, qaraabadaada fog, ama naadi kasta oo aad xubin ka noqon karto. U sheeg in cinwaankaaga cusub uu hadda joogo Florida. Waxaad bilaabi kartaa habsocodkan adiga oo buuxiya cinwaanka beddelka Adeegga Boostada.
Tani waxay muujin kartaa ujeeddada Baaqaaga Deganaanshaha, sidoo kale. Haddii ay timaado arrimo canshuureed, tani hubaal waxay kaa caawin doontaa kiiskaaga.
#3. Cusboonaysii Ruqsadahaaga Gobolka Florida
Waxaa jira ruqsado guud ahaan la aqbalo iyada oo aan loo eegin gobolka aad joogto. Liisanka darawalnimada ayaa ka mid ah liisamada noocaas ah, hubso in dib -u -qiimeyn lagu sameeyo Florida si shatigaagu u ansaxo. Sidaas oo kale u samee shahaado kasta oo aad haysato si aad weli u tababarto.
Xirfad kasta ha lahaato, tan oo kale ma aha oo kaliya ku saabsan socodka shaqada ee dhab ahaantii waxay kaa caawineysaa inaad muujiso ujeeddadaada inaad si joogto ah ugu joogto gobolka Florida.
Hubi inaad eegto xaaladdaada haddii aad wax shaki ah qabtid. Waxaa laga yaabaa inaad hesho xeerar iyo xeerar cusub intaad ku jirto.
#4. Ka Qayb Qaado Bulshadaada.
Runtii waa muhiim inaad dhex gasho bulshada aad ku dhex nooshahay. Hoos u tag xarunta bulshada si aad u ogaato sidaad u caawin karto. Tani waxay sii caddayn doontaa inaad tahay degane Florida.
Codee, ku biir jimicsiga, ka mid noqo ururka xaafaddaada, raadso dhakhtar iyo dhakhtarka ilkaha, oo aasaas xididadaada. Markasta oo aad sii xeeldheer tahay, ayaa inta badan aad si dhab ah u noqon doontaa degane Florida.
Waxaan rajaynayaa inaad sida ugu wanaagsan uga faa’iidaysan doonto maqaalkan. Nasiib wanaagsan!!!
15 Dooxada Stardew Sida ugu Wanaagsan ee Talooyin Lacag Loogu Sameeyo 2021…
Sida Lacag Loogu Sameeyo Guriga Kanada | 2021 Talooyin
Amarka Lacagta Meijer 2021: Sida uu u shaqeeyo | Talooyin | Khidmadaha
Waa Maxay Maalgelinta Isku -Darka? Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Waxaan maqlaa oo arkaa xidhiidho badan oo ka bilaabma weedha "Waan ku jeclahay runtii", laakiin...
Miyaad ka daashay inaad ku ciyaarto Xbox One kaaga? Oo waxaad la yaaban tahay sida Xbox One-kaaga…
10-ka Lacag dhigaal ee Ururada Daynta ugu Fiican 2022
Waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo cabbirka iyo wadarta hantida ee nidaamyada ururka deymaha ee adduunka oo dhan, laga bilaabo…